Afgooye, Baaba Xasan iyo Cadow oo maanta ku soo biiray Golaha Shacabka – Kalfadhi
Saddex xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhaba. Waxay buuxinayaan saddex kursi oo ka banaanaatay Golaha Shacabka. Cali Sh. Cabdullaahi (Cali Afgooye), Nuur Siidow Baaba Xasan iyo Cali Cadow Maxamed ayaa musharraxiintii la tartameysa uga guuleystay 3-da kursi ee ka banaaneyd Golaha Shacabka.
Xildhibaan Cali Afgooye waxa uu helay dhamaan codadka 51-dii ergo ee u codeyneysay kursiga uu ku soo baxay, waxaana halkaas hal codna ku helin Musharrax Siidcali Cismaan Xuseen, oo ka maqnaa goobta doorashada, ahaana walaalka xildhibaankii horay u isaga casilay kursiga uu maanta u tartamay, Xuseen Cismaan Xuseen.
Nuur Siidow Baaba Xasan ayaa isaguna ku guuleystay kursiga labaad ee ay dib u soo buuxintiisu maanta ka socotay Baydhaba. Waxa uu 48 cod ka helay 50-ka ergada ah ee kala dooraneysay isaga iyo Fiqi Cabdullaahi Mayow, oo helay hal cod. Guddiga Doorashooyinka ayaa sheegay inuu hal cod oo kale uu ka halaabay doorashadaas. Kursigaas la buuxinayey waxaa 30-kii Diseembar, 2018, ka geeriyooday Xildhibaan hore Korneel Ruush.
Cabdicasiis Cali Macalin, Cali Cadow Maxamed iyo Shamso Ibraahin Maxamuud ayaa kursigii saddexaad ku tartamay, waxaana ugu dambeyn ku guuleystay Cali Cadow Maxamed oo helay 28 cod, waxa uuna maanta noqday xildhibaankii saddexaad ee doorashadaas ka dhacday Baydhaba uga soo biiray Golaha Shacabka.
Kursiga uu buuxinayo waxaa horay u baneeyey Cabdicasiis Lafta Garee, oo hadda ah Madaxweynaha Koofur Galbeed, waxaana musharraxa ku soo xigay, Cabdicasiis Cali Macalin, uu ku haray codad 16 ahaa, halka ay Shamso Ibraahin Maxamuud heshay 4 cod. Guddiga Doorashooyinka ayaa sheegay in ay 3 cod ka halaabeen doorashadaas.
Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Madaxweynaha Koofur Galbeed, Cabdicasiis Lafta Gareen, oo dhiiragelin iyo dardaaran khudbad ahayd u jeediyey xildhibaannada cusub.